विप्लवको प्रश्न : अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरले नेपालको कायापलट हुन्छ ? | Ratopati
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ अमेरिकाले नेपालमा जबर्जस्ती एमसीसी थोपर्न खोजेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा आँच आउने सो सम्झौता कुनै हालतमा स्वीकार्न नसक्ने बताएका छन् ।
उनले अहिले नेपालमा एमसीसीविरुद्ध भएको आन्दोलन एउटा झिल्को मात्रै भएको पनि बताए । ‘अहिले एमसीसीविरुद्धको यो आन्दोलन झिल्को मात्रै हो, एमसीसी जर्बजस्त दलालहरूको कमिसनको लोभमा थोपर्न खोजियो भने राँको बन्छ राँको’, विप्लवले देशको माया हुने सवै नेपाली जनतालाई एकजुट हुन आव्हान गरे । ‘आउनुस्, पार्टीपाटीमात्रै होइन, एमसीसीविरुद्ध लडौ भनेर भन्दा कतिपयले पार्टीमा गारो हुन्छ भन्नुभयो । तर अव मेचीदेखि कालीसम्मका सवै जनता एक ढिक्का हुनेछन् र कुनैपनि मुल्यमा एमसीसी थोपर्न दिनेछैनौ’, विप्लवको दावी छ ।
सोमबार एमसीसीविरुद्ध अयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध र अमेरिकाको सुरक्षाका पक्षमा भएको बताए ।
‘अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नेपालमा एमसीसी लागु गर्ने भनिएको छ । कानुनी ढंगले अमेरिका नै माथि हुने, सुरक्षा पनि उसैले गर्ने त्यस्तो प्रावधान राखिएको छ’, विप्लवले लप्सेफेदीदेखि सुनौलीसम्म सुरक्षा गर्ने नेपालमा प्रहरी र सेना छैनन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि कतिपय मन्त्रीले एमसीसीको पैसाले सम्बृद्धि हासिल गर्न नसकिने अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरले के नेपालको कायापलट हुन्छ ? भन्दै सत्तापक्षलाई प्रश्न गरे ।
उनले नेपाली जनताको आकांक्षा र नेपालको स्वाभिमान छिन्न खोजिएको भन्दै नेपाली जनताले आफ्नो परिश्रमबाट जन्मेको सत्ता खोजेको बताए । उनले खर्बौं रकम भ्रष्टाचार गर्ने राज्यसत्तामा बस्नेहरूले एमसीसीले विकास हुन्छ भनेर गलत चर्चा गरिरहेको बताए । उनले राज्य पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको साटो विदेशीहरुको पाउ मोल्न लागि परेको आरोप समेत लगाए ।
उनले आफुहरु जनताप्रति प्रतिवद्ध भएको र विगतमा समेत सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाएको र अझै जनताको अधिकारको लडाइका लागि लडिरहने बताए । उनले आफुसँग भएको सहमति इमान्दारपूर्वक लागु गर्न सरकार पक्षलाई चेतावनी दिए । ‘हामी जनताको अधिकार चाहान्छौँ, स्वाधीन राष्ट्रका लागि लडिरहेका छौ । सत्यलाई दवाउन तरवार र बन्दुक चलाइएको छ तर बन्दुक र तरबार जनताका अगाडि केही पनि होइनन् । जनता भनेका आमा जस्तै हुन्’, उनले न्याय र सत्यको बाटोमा लगातार हिँड्ने बताए ।
उनले जयसिंह धामीलाई दिनदहाडै भारतले हत्या गरेको भन्दै नागरिकले राज्य नै नभएको महशुस भएको बताए । ‘जनताले राज्य नै नभएको महशुुुस गरेका छन, मन्त्रीहरुलाई कमिसन आयो आएन भन्ने चिन्ता छ’, उनले सुँगुरले खाएझै कमिसन खाइरहेको बताए ।